आविष्कार भए उन्नति- विचार - कान्तिपुर समाचार
फाल्गुन २१, २०७५ नारायण घिमिरे
काठमाडौँ — संसारमा मुख्यतः दुई प्रकारका अनुसन्धान हुन्छन् । एउटा, कुनै पनि विषयमा खोज्ने तर त्यसको निष्कर्ष केमा सदुपयोग गर्ने भन्ने सोचाइ नराख्ने प्राज्ञिक ( सैद्धान्तिक) अनुसन्धान । अर्को, पहिचान गरिएको समस्या सुल्झाउने उद्देश्यले गरिने व्यावहारिक (एप्लाइड) अनुसन्धान । सैद्धान्तिक अनुसन्धानमा सफल देखिएका धेरै अनुसन्धानका नतिजालाई हाताहाती प्रतिफल दिनेगरी व्यावसायिकीकरण गर्न सकिन्न ।
सामाजिक सञ्जालको विकाससँगै संसारमा नयाँ–नयाँ अनुसन्धानमात्र भएका छैनन्, संसारलाई रातारात ती कुरा थाहा पाउने अवसर मिलेकाले बजार माग दिनदिनै परिवर्तन भइरहेको छ । बदलिँदो बजार माग अनुसार तत्कालआफ्ना उद्योगको उत्पादन परिवर्तन गर्न नसक्ने प्रायः सबै उद्योग बजारबाट विस्थापित भएका छन् ।
हिजो तपाईंको छिमेकीमात्र प्रतिस्पर्धी थियो भने आज संसारको कुनै कुनाको नामै नसुनेको प्रतिस्पर्धीसँग तपाईंले बजार प्रतिस्पर्धा गरिरहनुपरेको छ । आजको बजार व्यवस्थामा तिनैमात्र सफल हुन सक्छन्, जसको आफ्नै व्यावहारिक अनुसन्धान र आविष्कार (इनोभेसन) निकाय छ । व्यावहारिक अनुसन्धान निकाय जसले ‘बडी अफ नलेज बेस्ड इन्कुबेसन सेन्टर’सँग ‘को–क्रिएसन’मा काम गर्छ ।
विश्वको मान्यता के छ भने तपाईंले आजको युनिभर्सिटी मोडलमा व्यावहारिक अनुसन्धान गर्नुभयो र प्राज्ञिकहरूले अब्बल भनी दाबी गर्ने सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडल अपनाउनुभयो भने पनि एक हजार डलर मूल्य बराबरको अनुसन्धानका निष्कर्षलाई व्यावसायिकीकरण गर्न १ देखि १० मिलियन डलरसम्म लाग्छ । तैपनि त्यो व्यावसायिकीकरणले तपाईंको लगानी उठाउँछ भन्ने निश्चित गर्दैन । त्यो खर्च न आजको दैनिक परिवर्तनशील बजार प्रणालीले धान्न सक्छ, न त व्यावहारिक नै छ ।
आज विश्वमा परम्परागत सार्वजनिक–निजी–साझेदारी मोडललाई को–क्रिएसन मोडलबाट प्रतिस्थापन गरिएको छ । को–क्रिएसन मोडलले तत्कालीन अवस्थामा उपलब्धमध्ये सबैभन्दा सस्तो तर सबैभन्दा उच्च गुणस्तरमा अनुसन्धानका निष्कर्षलाई व्यावसायिकीकरण गर्ने निश्चित गराउँछ । त्यसकारण आज संसारका ठूलठूला उद्योगहरू सहजै मुनाफा कमाई तत्कालै परिवर्तित बजारको माग पूर्ति गर्न सक्षम बनेका हुन् । त्यसरी सक्षम बनेका संस्थालाई ‘इनोभेटिभ’ कम्पनी भनिन्छ ।
नेपाल जस्तो मुलुकको विकासका लागि स्थानीय कच्चा पदार्थ र श्रममा आधारित उद्यमशीलतामार्फत हाताहाती प्रतिफल दिलाउन सक्ने धेरै ‘इनोभेटिभ कम्पनी’ र संस्थाहरूको स्थापना हुन जरुरी छ । ‘इनोभेटिभ’ कम्पनी र संस्था स्थापनाकोअनिवार्य पूर्वाधार भनेको नेपालस्थित प्राविधिक शिक्षालय, विश्वविद्यालय र अन्य अनुसन्धान संस्थाले ‘इनोभेटिभ कम्पनी’ र संस्थाका लागि पर्याप्त दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउन सक्नु हो ।
प्रदेश र केन्द्रीय निर्वाचनले सत्तामात्र हैन, पूरै प्रणाली नै परिवर्तन गराएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रसामु सार्वजनिक रूपमा तीन कुरा राखेका छन् । पहिलो– हाम्रो शिक्षा जसले पढेको हो, उसको आफ्नै उत्थानका खातिर त भएन–भएन, जीविकोपार्जनका लागिसमेत पीडादायी बनिरहेको छ ।
दोस्रो– हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले राज्यकोषबाट विशाल धनराशि लिँदै सीमित घेरामा रहेर असीमित प्रतिभा बोकेका विद्यार्थीहरूलाई असफलको दर्जा दिँदै राष्ट्रको लगानी, विद्यार्थीको सम्भावना र अभिभावकको सपनामा तुषारापात गरिरहेका छन् । विद्यार्थीलाई पढाइका नाममा आईए, बीए र एमए डिग्रीधारी साक्षरमात्र साबित गरिरहेका छन् ।
तेस्रो– हाम्रो शिक्षाकै कारण प्राकृतिक रूपमा वरदान प्राप्त नेपाल ठगिएको, मानव बस्तीका लागि पूर्ण प्रतिकूल प्रकृतिबीच आफूलाई समृद्ध बनाएका इजरायल र खाडीमा गएर सस्तो श्रमिकका रूपमा जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने बाध्यता लादिएको छ । परम्परागत रूपमा तीक्ष्ण प्रतिभा बोकेका पुर्खाको ‘जिन’ भएका नेपाली विद्यार्थी असाधारण सिर्जनशीलता बोकेका मात्र होइनन्, आफ्नो रुचि अनुसारको व्यावहारिक ज्ञान लिने अवसर पाए विकासमा कायापलट गर्नसक्ने सम्भावना बोकेका धरोहर हुन् ।
आविष्कारको पूर्वाधारको सबैभन्दा पहिलो वैज्ञानिक सर्त भनेको प्राविधिक शिक्षालय र विश्वविद्यालयमा बजारमुखी पाठ्यक्रम उपलब्ध हुनु हो । बजारमुखी पाठ्यक्रमको अर्थ पाठ्यक्रममा परिवर्तित ‘बडी अफ नलेज’को ज्ञान संलग्न भएको हुनु हो । ठूला धनराशि खर्चेर पटक–पटक परिवर्तन भएका हाम्रा प्राविधिक शिक्षालय र विश्वविद्यालयहरूको पाठ्यक्रम आज पनि कम्तीमा ८० वर्षभन्दा पुरानो ‘बडी अफ नलेज’मा आधारित भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
आज संसारका विश्वविद्यालयहरू बढीमा १० वर्ष पुराना र प्राविधिक शिक्षालय बढीमा ५ वर्ष पुराना ‘बडी अफ नलेज’मा आधारित पाठ्यक्रम आफ्ना विद्यार्थीलाई सिकाइरहेका छन् । हाम्रा प्राविधिक शिक्षालय र विश्वविद्यालयले दशकौंदेखि अध्यापन गराइरहेका आयातीत ज्ञान लादिएका, नाम मात्रका प्राविधिक, स्थानीय उद्यमशीलताको विकासमा प्रतिकूल ८० वर्षभन्दा पुरानो ‘बडी अफ नलेज’मा आधारित पाठ्यक्रमले विद्यार्थीलाई डिग्रीधारी साक्षरबाहेक अरू बनाउन सक्ने अवस्था नै थिएन ।
पटक–पटक विज्ञान तथा प्रविधि नीति, संस्थाको व्यवस्थापन, संस्थागत संरचना, भौतिक पूर्वाधार र व्यवस्थापनमा सुधार प्रयास भएकै हुन् । शिक्षामा अग्रगामी छलाङमार्फत सुधार या क्रमभंगताका लागि गठन गरेका विभिन्न आयोग र समितिले सरकारलाई सुझाव दिने क्रम जारी छ । कतिपय सुझाव सरकारले प्राप्त गरिसकेको छ भने कतिपय अन्तिम अवस्थामा पुगी सरकारको हाता लाग्दैछन् ।
आयोग र समितिहरूले सुझाएका अग्रगामी भनिएका ती सुझावमा समेत पुरानै सोचाइ, तरिका, पारा र पद्धतिको पुनरावृत्ति देखिन्छ । पुरानै सोचाइ, तरिका, पारा र प्रणालीले नयाँ परिणाम दिन नसक्ने निश्चित छ । शिक्षामा अग्रगामी छलाङमार्फत क्रमभंगता सुरु गर्ने सपना देखाएर पेस गरिएका, गर्वका साथ सञ्चार माध्यममा प्रस्तुत गरिएका त्यस्ता सुझाव चुरो कुरामा पुगेकै भेटिन्नन् ।
भेटिन्छ त केवल प्राविधिक व्यवस्थापन, संरचना र सञ्चालन प्रक्रियामा हेरफेरका लागि सुझाव । त्यस्ता सुझाव अक्षरशः लागू हुँदा हिजो डिग्रीधारी साक्षर कहलिएकाहरू भोलि प्राविधिक डिग्रीधारी साक्षरमात्र कहलिनेछन् । तिनले मुलुकको विकासका लागि सीपमूलक तालिम र बजारमुखी उद्यमशीलताको विकासमा खासै अर्थ राख्नेछैनन् ।
मुलुकले कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४ प्रतिशत शिक्षामा खर्च गर्छ । त्यो सार्क मुलुकमा उच्च मध्येमै पर्छ । तर आविष्कारमा सार्क मुलुकमै नेपाल पछाडि छ । इनोभेसन वा विकासका लागि नेपालको तत्कालको आवश्यकता भनेको सीपमूलक तालिम र बजारमुखी उद्यमशीलताको हस्तान्तरण नै हो । त्यसबाट सरकारले गाउँ–गाउँमा प्राविधिक स्कुल भनी प्राविधिक शिक्षालाई अति महत्त्व दिएको प्रस्ट हुन्छ । प्राविधिक शिक्षालयलाई ‘प्रविधि र विषय’ दिनसक्ने ‘बडी अफ नलेज’ दिने इनोभेसनका इन्कुबेटर नेपालमै उपलब्ध हुन जरुरी छ ।
इनोभेसनका इन्कुबेटरहरूले प्राविधिक शिक्षालय र विश्वविद्यालयलाई स्थानीय बजारमुखी ‘बडी अफ नलेज’मा आधारित पाठ्यक्रम विकास गर्न, आफ्ना विद्यार्थीलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै प्रतिस्पर्धी बनाउन, आवश्यक ज्ञान र सीप उपलब्ध गराउन र परिवर्तित प्रविधि र बजार माग अनुसार नियमित पाठ्यक्रम परिमार्जनमा सहयोग पुर्‍याउँछन् ।
नयाँ ग्राजुएट, वैदेशिक रोजगारबाट ८–१० लाख लिई फर्केका र स्थानीय स्तरमै स्वरोजगार हुनचाहने, नयाँ पेसामा जान चाहने उद्यमीलाई उनीहरूको आवश्यकता अनुरूपको सीपमूलक तालिम प्याकेज विकास गरी उपलब्ध गराउन प्राविधिक शिक्षालयहरूलाई पनि तिनले सहयोग गर्छन् ।
मुलुकमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूसँग को–क्रिएसनमार्फत उनीहरूको उत्पादन परिवर्तित बजारको माग पूर्ति गर्न सक्षम र गुणस्तरलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारले ग्रहण गर्ने बनाउन सहयोगी भूमिका खेल्छन् । साथै विदेशी इन्कुबेटरहरूसँग उद्यमी तथा शिक्षालयहरूलाई जोड्ने काम गर्छन् । जबसम्म इनोभेसनका इन्कुबेटरहरू नेपालमै उपलब्ध हुन्नन्, तबसम्म प्राविधिक शिक्षालय र विश्वविद्यालयले पढाइका नाममा प्रधानमन्त्रीकै भाषामा प्राविधिक प्रमाणपक्रधारी साक्षर जनशत्ति मात्रै उत्पादन गरिरहनेछन् ।
प्रकाशित : फाल्गुन २१, २०७५ ०७:५६
युवा पुस्ताले भ्यापलाई चुरोटको लत छाड्ने साधनका रुपमा बुझिरहेका छन् । उत्पादकहरु भ्यापले चुरोटले भन्दा कम हानि गर्ने दाबी गर्छन् । भ्याप दाबी गरिएजस्तो सुरक्षित छ कि छैन, त्यो कतैबाट पुष्टि भएको छैन । यो चुरोटको लत छाड्ने साधन हो त ?
माघ १८, २०७५ नारायण घिमिरे
काठमाडौँ — संसारकै एक कमजोरी बनिरहेको छ– चुरोट, सिँगार र हुक्का सेवन अर्थात् स्मोक ।
यसले निम्त्याएको स्वास्थ्य समस्याले संसारभरि नै मानिसको जीवनयापनको लागत (कस्ट अफ लिभिङ) बढाइरहेको छ । यसको नयाँ विकल्पका रूपमा भित्रिएको छ– भ्याप । यो विकल्प नेपालमा पनि सहजै बनिसकेको छ । नेपालकै अनलाइन स्टोर सर्च गर्दा पनि यसको व्यापकता अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालमा ५ हजारदेखि माथिका भ्यापहरू उपलब्ध छन् ।
विशेषगरी युवा पुस्ताले यसलाई चुरोटको लत छाड्ने साधनका रूपमा अथ्र्याएका छन् । यसका उत्पादक कम्पनीहरू यसलाई चुरोटले भन्दा कम हानि गर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । तर, भ्याप दाबी गरिएजस्तो सुरक्षित भने छैन । तर, यो चुरोटको लत छाड्ने साधन हो त ?
फुड फ्लेवरलाई सुर्तीको झोलसँग मिसाएर वा नमिसाईकन उपकरणको सहयोगमा बनाइएको धूवाँजस्तो देखिने कुहिरोलाई अंग्रेजीमा इलेक्ट्रोनिक भ्यापर भनिन्छ । तमाखु पिएजस्तै इलेक्ट्रोनिक भेपरको सेवन गर्नुलाई इलेक्ट्रोनिक भ्यापिङ (छोटकरीमा भ्याप) भन्ने गरिन्छ । भ्यापका लागि बनाइएको सुर्तीको रससहित वा रहितको फ्लेवरको झोललाई जुस वा लिक्विड भन्ने गरिन्छ ।
जुसलाई वाफमा परिवर्तन गर्ने उपकरण विभिन्न थरीका हुने हुँदा प्रकारअनुसार इलेक्ट्रोनिक लाइटर, ई–लाइटर, ई–टर्च, ई–पेन, ई–सिसा, ई–हुक्का, मड, भ्याप किट्स आदि नाम दिइएको हुन्छ । सर्को तान्दा आउने सेताम्मै कुहिरो धूमपानको तलतल मेट्न सहयोगी हुने भन्दै यसको प्रयोग बढ्दो छ । संसारमा जुसको बिक्रीवितरण चुलिएसँगै यो कत्तिको सुरक्षित छ भन्ने सवाल पनि उठ्ने गरेका छन् । यसको उत्तर त्यति सहज भने छैन ।
उत्पादकहरूको दाबी छ, भ्यापमा प्रयोग हुने वस्तु खाद्य पदार्थमा पनि प्रयोग हुन्छन्, त्यसैले यो सुरक्षित छ । भ्यापमा प्रयोग हुने जुस वा लिक्विडमा सामान्यतया उच्च गुणस्तरका कन्सन्ट्रेटेड फ्लेवरको झोल हुने हुनाले तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित मानी चुरोट, सिसा (हुक्का) आदि अम्मलको विकल्पका रूपमा संसारभर माग भएको र बिक्रीका लागि अनुमति दिइएको हो । अमेरिकाको खाद्य तथा ड्रग नियन्त्रण नियोग (यूएस–एफडीए) ले ई–भ्यापिङको प्रयोग भर्खरै सुरु भएकाले यो कत्तिको हानिकारक छ भनी यकिन गर्न समय परिपक्व नभइसकेको जनाएको छ ।
जुसमा समेत प्रयोग हुने खाद्य पदार्थमा प्रयोग गर्न अनुमति दिइएका फ्लेवर सामान्यतया खानका लागि सुरक्षित भनी सिफारिस गरिएका कच्चा पदार्थ हुन् । तिनलाई खानामार्फत खाने प्रयोजनका लागि मात्र गरिएका परीक्षणका आधारमा सामान्यतया सुरक्षित भनी प्रमाणित गरिएको हो तर श्वासप्रश्वास प्रणालीमार्फत ई–फ्लेवरको सेवन सुरक्षित छ वा छैन भनी हालसम्म खासै परीक्षण भएको छैन । त्यसैले एफडीएले निकोटिन भएका र नभएका दुवै ई–भ्यापिङ मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन सक्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
हाल बजारमा भ्यापिङका लागि धेरै प्रकारका ई–भ्यापराइजर पाइन्छन् । प्रथम पटक बनाइएको इलेक्ट्रिकल भ्यापिङ लाइटर चुरोटजस्तै देखिने गरी बनाइएको थियो । तर, यो ‘युज एन्ड थ्रो’ प्रकृतिको भएकाले कालान्तरमा महँगो पर्न गएकाले दैनिक प्रयोगलाई ध्यानमा राखी एकपटक भ्यापराइजर किनेपछि ई–जुस भरेर पटकपटक प्रयोग गर्न सकिने पाइप र विविध खाले ई–भ्यापराइजर बनाइएको हो । यी उपभोक्ताका लागि कसरी सजिलो र किफायती हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानमा आधारित डिजाइन हुन् ।
चुरोटका पारखीलाई चुरोटजस्तै गरी पिउन मिल्ने ई–सिगरेट्स पेन, सिसा वा हुक्काका सौखिनलाई ई–सिसा वा ई–हुक्का अनि बिँडी वा सिँगारप्रेमीलाई ई–सिँगारको विकल्प दिई बजारमा उपभोक्ताको रुचिअनुसारको भ्यापराइजर छनोट गर्ने व्यवस्था उपलब्ध गराइएको छ । बजारमा पाइने भ्याप (लाइटरजस्ता डिजाइन वा प्रकृतिमा भए पनि सबैको प्रविधि उस्तैउस्तै छ ।
भ्यापमा भ्यापराइजरको एकातर्फ जुस राखिन्छ भने अर्कोतर्फ तताउने र त्यसलाई स–सानो वाफमा परिवर्तन गर्ने हिटिङ क्वाइलजडित भ्यापराइजर हुन्छ । सर्को तान्दा जुस भ्यापराइजर हुँदै मुखसम्म पुग्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । जसले गर्दा लिक्विड बाक्लो सेतो कुहिरो धूवाँ बन्छ ।
हिजोआज चुरोट, तमाखु र सिँगारको विकल्पमा भ्यापिङलाई लिने गरिन्छ । सुरुमा निर्धारित मात्राको सुर्तीको रस मिसाइएको (निकोटिन एक्स्ट्रयाक) जुस प्रयोग गरिन्छ । यो विधिमा जुसमा निकोटिनको मात्रा क्रमश: घटाउँदै लगेर अन्त्यमा निकोटिनबिनाको जुस पिउने बानी बसाली सुर्तीजन्य लागूपदार्थ सेवनबाट छुटकारा लिने तरिका अपनाइन्छ ।समग्रमा हेर्दा भ्याप पूर्ण स्वस्थ होइन कि परम्परागतको धूमपानभन्दा कम हानिकारक विकल्प मात्र हो । धूमपानको लत लागेकाहरूलाई डोज घटाउँदै लगेर अन्त्यमा छुटकारा दिलाउने तरिका पनि हो, भ्याप ।
चुरोटमा साँच्चैको धूवाँ मुख र फोक्सोमा पुग्ने तर भ्यापमा वाफ वा भ्यापर मुख हुँदै फोक्सोमा पुग्ने भएकाले सुर्तीको धूवाँका कारण हुने दमलगायतका रोग भ्यापमा तुलनात्मक रूपमा कम हुने मानिन्छ । सामान्यतया सुर्तीको निकोटिनसहित डिजाइन गरिएको जुसमा निकोटिनको मात्रा २० माइक्रोग्राम प्रतिमिलिलिटर राख्ने गरिन्छ । बच्चालाई हानि पुर्‍याउन निकोटिनको मात्रा १० माइक्रोग्राम काफी हुन्छ भने जवानका लागि ३०–६० माइक्रोग्राम प्रतिएमएल ।
यदि भ्यापिङपछि छाती वा घाँटी पोल्ने, चिलचिलाउने वा खोकी लाग्ने लक्षण छ भने त्यो फ्लेवर प्रयोग गर्नु हुँदैन । बजारमा पाइने प्राय: फ्लेवरको फर्मुला गोप्य हुन्छ । भ्यापका पारखीलाई जुस फ्लेवरमा तल दिइएका पदार्थ भएको अवस्थामा सकेसम्म प्रयोग नगर्न संसारभरि नै सल्लाह दिइँदै आइएको छ ।
१) डाइएसिटाइल बटर फ्लेवरमा पाइने कम्पाउन्ड हो । दूधको बटरमा प्राकृतिक रूपमै डाइएसिटाइल हुन्छ । यदि कुनै फ्लेवरमा यो प्राकृतिक रूपमा होइन कि फ्लेवर कम्पाउन्डिङका क्रममा अन्यत्रबाट पछि मिसाइएको छ भने त्यसलाई एडेड डाइएसिटाइल भनिन्छ । एडेड डाइएसिटाइलले फोक्सोलाई हानि गर्छ ।
२) कृत्रिम रूपमा बनाइएको एसिटोइन पनि भ्यापराइजेसन प्रक्रियामा डाइएसिटाइलमा परिवर्तन हुने हुँदा यो पनि प्रयोग गर्नु हुन्न ।
३) कृत्रिम रूपमा तयार पारिएको एसिटाइल प्रोपोनायलको असरबारे मुसामा गरिएको परीक्षण शंकास्पद पाइएकाले यसलाई पनि निषेध गर्नु बुद्धिमानी मानिन्छ ।
४) कौमारिन भन्ने यौगिक क्यासिया, सिनामन र अन्य बिरुवामा पाइन्छ । यसले मिर्गौलामा पार्ने असरका कारण खानामा प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध छ । तैपनि यो टोबाको फ्लेवरमा मज्जैले प्रयोग हुने गर्छ र हालसम्म निषेध समूहमा छैन । त्यसैले यसको प्रयोग नगर्नु राम्रो हुन्छ ।
५) एसिटिक एसिडले आँखा, छाला र श्वासप्रश्वास नलीमा खसखस गराउँछ त्यसैले यो भएको लिक्विड प्रयोग नगर्नु राम्रो हुन्छ ।
६) आफूलाई राम्रो गरिरहेको छैन भने सस्ता भ्यानिला वा भ्यानिलिन प्रयोग गरिएका र फुडका सेन्थेटिक कलर हालिएका जुस पनि प्रयोग गर्नु हुन्न ।
भ्यापको पनि असल र खराब पक्ष छन् । आज भ्याप क्रेज संसारमै असामान्य रूपमा बढिरहेको छ । यसबाट नेपाली बजार पनि अछुतो छैन । संसारभर सुर्तीयुक्त र सुर्तीरहित भ्यापको प्रयोग यति तीव्र बनिरहेको छ कि भविष्यमा चुरोट उद्योगहरूलाई यसले विस्थापित गर्ने अनुमान छ ।
–लेखक क्यानडामा खाद्य वैज्ञानिक हुन् । उनी जुस फ्लेवरको अनुसन्धान र विकासमा संलग्न छन् ।
प्रकाशित : माघ १८, २०७५ १३:१२